सानिमा बैंकको केन्द्रिय कार्यलयमा कोरोना जोखिम, उच्च कर्मचारी भन्दछन्ः नेतृत्वले हाम्रो कुरा सुनेन - Aathikbazarnews.com सानिमा बैंकको केन्द्रिय कार्यलयमा कोरोना जोखिम, उच्च कर्मचारी भन्दछन्ः नेतृत्वले हाम्रो कुरा सुनेन -
uc davis phd creative writing scientific research proposal writing format homework help clipart homework help grade5module4i can't write my phd thesis summer vacation homework for nursery class / help with writing research papers swansea university english literature and creative writing job application creative writing help to write phd thesis written application letter format mfa creative writing florida research paper thesis statement maker creative writing asacareer python homework help ending hiv sangamo biosciences and gene editing case study apa arti do your homework creative writing homework satan helps with homework creative writing ks3 english residency personal statement writing services primary homework help tsunamis creative writing jobs san antonio creative writer job cover letter best thesis statement maker paid literature review have someone write an essay similarities of technical and creative writing creative writing good phrases alien creative writing prompt creative writing groups san diego
सानिमा बैंक लिमिटेड भन्ने वित्तिकै विदेशमा रहेको नेपाली एनआरएनको लगानीको बैंक मानिन्छ । तर, जहाँ कोरोना जोखिम उच्च देखिन्छ । करिब ११ बजे हामी सानिमा बैंकमा एउटा डिपोजिटको कारोबारका कारण पुगेका थियो । करिब १.५० बजे हामीले ३ घण्टा पछि डिपोजिट गर्न त सफल भयौं । तर, बैंकमा कोरोनाका उपायका कुनै पनि साधन नदेख्दा हामी तीन छक्क प¥यौ । केन्द्रीय कार्यालय नक्सालको तस्बीरमा देखाईएको यो भवन देख्दा कोरोनाको डर मात्रै भएन त्रास जस्तो देखियो र हेरियो पनि ।
कारोबार गर्न सोसल डिस्टेन्स देखि लिएर माक्स, पञ्जा र सेनिटाईजर अनिवार्य हुन्छ । तर, बैंकका कर्मचारीले नै नमाक्स, न सेनिटाईजर, न त पञ्जा नै लगाएका छन् । ग्राहकहरुको भीड भाड फिल्मी महलमा जस्तो देखिएको छ । हामीले काउण्टरमा काम गर्ने एक कर्मचारीलाई ग्राहकको हिसाबले सोध्यौ तपाईहरुको यस्तो बेहाल छ, कोरोनाको रोगथामका उपाय किन नअपाउनु भएको ? भनी उनीले भनिन् सर बैंक नेतृत्वले हाम्रो कुरा सुनेन हामीले कसलाई भन्ने तपाईले त पत्रकारको कार्ड लगाउनु भएको छ । यो कुरा उठाईदिनु प¥यो नि ।
उनीले थपिन् हामीलाई गाडीबाट ल्याउने र लाने व्यवस्था छ । तर, बाख्रा जस्तै गरि राखिन्छ । हामी उच्च जोखिममा छौं । मैले फेरि सोधे कोरोना बीमा अरु केही यो बेला काम गर्ने कर्मचारीलाई सुविधा त दिएको होला नि ? उनीले भनिन् के सुविधा दिनु सर काममा नआएर स्पष्टिकरण लिने हटाउने मौखिम चेतावनी बैंकले चाहि दिएको छ । वीमा त परको कुरा हो सर ।
यी र यस्ता कर्मचारीका अभिव्यक्ति सुनेपछि हाम्रो मन कटक्क खायो । मन सिरिङ्ग पार्दै हामी बैंकबाट ३ घण्टा पछि हिड्यौ ।
यी कुरा एउटा कथा होइन । यथार्थ हो भनिन्छ सानिमा बैंकका वार्षिक २ करोड ५० लाख १० हजार ११ रुपैया भत्ता तलब र अन्य सुविधा बुझ्ने भुवन दाहाल सीइओ छन् । उनी नेपाल बैंकर्स संघका सभापति हुन् । तर, उनीकै बैंक कोरोना जोखिममा छ । ग्राहक त्रसित छन् । कर्मचारीहरु कोरोना जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन् । उनीलाई यस कुराको कुनै चिन्ता नै देखिदैन, गर्भनर साब ?
यो कस्तो बैकिङ्ग हो । गर्भनर साब ? बैंकको भन्दा अरु कुरामै हाम्रा सीइओ साब लाग्नु भएको जस्तो देखिन्छ । एक संचालकले टेलिफोनमा भने । उनीले थपेः– उहाँको त नगद कारोबारमा कोरोना कर, कर्मचारीको भत्ता कटाउने काम र गर्भनर साबलाई गाली गलोज गर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ । अरु कुरा मतलब नै छैन् ।
होसियार ग्राहक महानुभावहरु सानिमा बैंक देखि ! जहाँ कोरोनाको त्रास कायमै देखिन्छ । सचेत रहौं ।
सधै गर्भनर साबलाई गाली गर्ने काम गर्ने भूवन दाहालले अब बैंकको बेथितीलाई तत्कालै नसच्चाए बैंकका ग्राहक, गार्ड देखि बैंककै कर्मचारीलाई यो अदृश्य शक्तिबाट आएको कोरोना भाइरसले नसताउला भन्न सकिदैन । सचेत भया ।
मौद्रिक नीति: बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन, व्यवसायीहरुलाई सहुलियत, कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य